मजदुर दिवसः‘मालिक’हरु सडकमा, श्रमिकहरु नालीमा
मालिक र मजदुर विचको दुरी आँखाले देख्नै नसक्नेगरी फराकिलो हुँदैछ ।
माथी समाचारमा प्रयोग गरिएको तस्विर आज विहान ९ बजे ड्याम साइडमा काम गरिरहेका मजदुर यम बहादुर महतराको हो । दाङबाट पोखरा आएर श्रम गर्न थालेको दशकौँ भइसकेछ । उनीसंगै काम गरिरहेका सल्यानका कमल नेपाली भन्छन् 'आज काम नगरे बेलुकीकाे छाक टार्नै धाै धाै हुन्छ ।' सरकारले उनिहरुकै लागि आजको दिन भनेर सार्वजनिक विदा दिएको छ । तर उनीहरुलाई यी तिथि, मिति, घडी, पलाले झन् पीडा दिदाेँरहेछ ।
आज 'मे वान' अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर वर्गको हथौडा, हँसिया र पाँचकुने तारा अकिंत लाल झण्डा नेपालले उचालेको पनि सात दशक क्रस भएको छ ।
नेपाल सन १९६६ मा आइएलओको सदस्य भयो । सन् १९९४ मा मात्र आधिकारिक कार्यलय स्थापित भयो । यसले बेलाबेलामा रोजगारी केन्द्रमा समावेशी वृद्धि, श्रम बजारको प्रशासन, औद्योगिक सम्बन्धमा सुधार, काममा आधारभुत सिद्धान्त र अधिकारका विषयमा वकालत र पैरवी गरे जस्तो स्वाँङ पादै आएको छ । मालिक र मजदुर विचको दुरी आँखाले देख्नै नसक्नेगरी फराकिलो हुँदैछ ।
ओली स्कुलको समाजबादी सरकारले श्रमिकको मासिक न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको झन्डै एक वर्ष भयो । कार्यन्वयन गर्नुको साटो त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ । अझ सामाजिक सुरक्षामा जाने बित्तिकै श्रमिकका सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने नाटक मञ्चन गर्यो । सुपर फ्ल्प भयो भन्दा कुनै फरक पर्दैन । स्वरोजगार कार्यक्रम लागु भएको एक वर्ष वित्यो एक जनाले पनि रोजगार पाएको छैन् ।
आफ्नो झुपडीको रक्षाका निम्ति महलहरु नष्ट गर
इतिहासमा पटक पटक श्रमिक आन्दोलन भए, कयौँले ज्यान को आहुति दिए, हजारौँ सुलिमा चढाइए, धेरैको घरबार छिन्नभिन्न भयो । तर हुने खाने हरु र हुदा खानेहरु बिचको दुरी २१ ‌‌‌औँ शताब्दिमा पनि विद्यमान छ ।
विश्व अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा मैले युरोपका २ प्रमुख घटनाहरुलाई प्रस्तुत गर्न उचित ठाँने पहिलो बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिः बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिको बिज १७६० तिर नै छरिएको थियो । तर यो फल्न फुल्नलाई धेरै समय लाग्यो । अठारौँ शताब्दीको अन्तसम्ममा यो राम्ररी हुर्क्याे र १८३० मा पुरा भयो । त्यसै बेला अर्थात अठारौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा बेलायतमा पूँजीपतिहरुको उदय भयो । आफ्नो ज्यालामा जीवन निर्वाह गर्ने श्रमजीवी वर्गको जन्म पनि त्यसैबेला बेलायतमा भयो ।
नयाँ नयाँ कलपूर्जाहरुको आविष्कारले सुत कात्ने र कपडा बुन्ने साधनहरुमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरिदियो । कारखानाहरुमा नयाँ यन्त्रहरुको साथसाथै उत्पादनका साधनहरुको पनि केन्द्रीयकरण हुदै गयो । ससाना दस्तकारहरु तबाह भए । ज्यालामा निर्भर रही गरिखाने मजदुरहरुको संख्या बढ्न थाल्यो । दस्तकारहरुको स्वतन्त्र पेशा खतम भैसकेको थियो । दस्तकारहरु पूजीपतिहरुको “जी हजुरी” गर्न लागेका थिए । आफ्नो फाइदाको लागी पूजीँपतिहरुले कारखानाबाट हजारौँको संख्यामा मजदुरहरुलाई निकाली दिन्थे । विचराहरु भोकभोकै मर्न कर लाग्दथ्यो । यहि अन्यायको विरुद्ध लड्नलाई मजदुर वर्ग कम्मर कसिरहेको थियो । आखिरमा विद्रोह पनि गर्यो ।
त्यसबेला मजदुरहरुको रिस चाहिँ मेशिनहरुसँग थियो । रिसले चुर भएर मेशिनहरु बिगार्दथे , कारखानामा आगो लगाइदिन्थे । राजसत्ताधारी र मालिकहरुले ति मजदुर हरुमध्ये कैयंनलाई फाँसीमा लट्काए र ज्यान सजाय दिए ।
मजदुर आन्दोलनको यो पहिलो पाइलो थियो । पछि उनिहरुको आन्दोलनको रुप बदलियो । उनीहरुको दुख, कष्ट र गरीबीको कारण कलपुर्जाहरु होइनन् मेशिनहरुको निजी स्वामित्व अर्थात पूजीवादी व्यवस्था हो भन्ने कुरा मजदुरहरुले बुझ्न थाले ।
दोस्रो फ्रासिन्सी क्रान्ति- यो क्रान्ति १७८९ मा शुरुभएको थियो । तर १७९४ देखिनै यस आन्दोलनको शक्ति क्षिण हुदै गयो । नेपोलियनले १७९९ मा फ्रान्समा आफ्नो फौजी ताना शाही कायम गरे । क्रान्तिलाई नष्ट गरिदिए । यो शासन व्यवस्था हिन्दुस्तानको मुगल बादशाहको र नेपालको राणाशाहीको शासन व्यवस्था जस्तै थियो । यो राजतन्त्र धनी मानी र पादरीहरुको हातमा थियो । यी वर्गहरुले आफ्ना केही अधिकारहरु पूजीपति वर्गलाई दिएका थिए तर किसान, दस्तकार र सानातिना पसलेहरुलाई कुनै पनि सामाजिक अधिकार थिएन । यसै कारण उनिहरुले एउटा जर्वरजस्त क्रान्तिकारी आन्दोलनको शुरु गरे । धनी मानिहरुको बिरुद्ध तमाम जनतालाई उठाउनको निम्ति उनीहरुले आफ्नो झुपडीको रक्षाका निम्ति महलहरु नष्ट गर भन्दै नारा लगाए । “स्वतंत्रता, समानता, र भातृत्व” को झण्डा उठाए । यो सँगै १८३० को जुलाई क्रान्ति र चार्टिस्ट आन्दोलनले पनि मजदुर वर्गको वकालत गर्यो ।
मजदुरसंग कुराकानी गर्दै लेखक
नेपाली मजदुरको र्दुदशा ! ‘मालिक’हरु सडकमा
हामी मध्ये कतिपयले सुन्यौ, पढ्यौ र भोग्यौ पनि होला, विराटनगरको हडतालको समाचार पाउने वित्तिकै काठमाडौँमा राणाको गढमा पनि हडतालको लहर फैलियो । बिजुली अड्डाका कालीगढ, टकसारका कालीगढ, ब्यांकका हुलाकी र अस्पतालका स्टाफहरुले हडताल गरे । विराटनगर मजदुर हडतालको खवरले उत्साहित भएर नेपालगंजका किसानहरु पनि राणा र जमीन्दार दुवैलाई खतम गर्न मैदानमा उत्रे ।
यी सबै कुराहरुबाट यो स्पष्ट झल्कन्छ कि विगतमा नेपाली जनताको दुश्मन केवल नेपाली सामन्त राणा, राजा रजौटा र राजनैतिक पार्टीमात्र होइनन् । वास्तवमा यी वर्ग हरुलाई आड, भरोसा र टेवा दिने भारतीय पूँजीपति र विश्व प्रतिक्रियावादीहरुको नेता आङ्गलो अमेरिकन साम्राज्यवाद पनि हुन ।
पत्रकार विकास रोका मगरले भने झैँ ‘मे वान’ को दिन ¥यालीमा घन्काइएका चर्काचर्का नारा सुनिन्छ – सडकमा ।
¥यालीमा उनै पुरानै अनुहार देखिन्छन् अर्थात ‘मालिक’हरुको ।
मालिकहरु आफ्ना कामदारलाई यति प्यार गर्दा रहेछन् कि उनीहरु नै श्रमिकको झन्डा बोकि हिँडेका छन् ।
उनीहरुका अधिकार काँधमा राखेर बाटोमा चिच्याइराखेका छन् ‘श्रमको सम्मान गर । श्रमिकको सम्मान गर ।’
के यहि हो त मजदुर दिवसको औचित्य ? मालिकको यस्तो डबल स्टान्र्डर नाँगेझार नपारी मजदुरको दिन फिर्ने कुरै भएन् । यो मजदुरहरुको लागि दुर्भाग्य पुर्ण छ ।
बुधवार, बैशाख १८, २०७६, ०२:०५:००